Maraykanka oo ka baxay heshiiskii “Migartion Compact” ee muhaajiriinta & qaxootiga – Kasmo Newspaper
Maraykanka oo ka baxay heshiiskii “Migartion Compact” ee muhaajiriinta & qaxootiga
Updated - December 3, 2017 2:16 pm GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa go’aan ku gaaray in dalkiisu dib uga laabto heshiiskii Caalamiga ahaa “Migration Compact” ee muhaajiriinta iyo qaxootiga. Madaxa Ergada Q.M. ee Maraykanka, Amabassador Nikki Haley ayaa, Sabtidii 2dii Disember 2017, ku wargalisay Xoghayaha Guud, Antonio Guterres, in nuxurka heshiiska wax u dhimayo madaxbannaanida Qarameed (Sovereignty) ee Maraykanka.
Mashruucaas Migration Compact waa qorshihii horey 15kii April 2016, Xukuumadda Talyanigu ugu soo jeediyay Midowga Yurub, si dib loogu eego siyaasadaha Yurub ee xiriirka dalal 3aad, gaar ahaa Afrikaanka, oo ay ka soo jeedaan qaxootiga ugu badan ee Badda Dhexe u sii maraya Yurub.
Bishii September 2016, 193kii dal ee Fadhiga Guud (General Assembly) ee Q.M. ayaa si buuxda u oggolaaday qoraal la magac baxay “Declaration of New York”, kuna saabsanaa qaxootiga iyo muhaajiriinta. Dokumentigas waxaa loola jeeday sidii loo hagaajin lahaa, muddada dheer, maaraynta qulqulka Caalamiga ah ee muhaajiriinta, qaabbilaaddooda iyo dib ugu celintooda dalalkoodii intaba.
Ilaa markii Donald Trump soo galay Aqalka Cad, bishii Jenaayo 2017, ma ahan markii u horreysay oo Madaxweynuhu buriyo heshiisyo Caalami ah oo horey uu u galay Madaxweynihii ka horreeyay,Barack Obama.
Wuxuu jabiyay heshiiskii Caalamiga ahaa ee Paris, kaas oo sannadkii 2015kii lagu yaraynayay heer-kulka cimilada dunida, wuxuu kale oo go’aamiyay in uu 2019ka ka baxo Hay’adda UNESCO, sababo la xiriira in laga eexday dalka Israel.
Waxaa kale oo uu muujiyay in aaanu xurmayn doonin xakamayntii hubka Nuklearka isaga oo xaqiray xurmada Iiraan u hayso heshiiskii 2015ka ee xaqiijinayay isticmaalka nabadgalyada ah ee barnaamijkeeda Atoomigga.
Ka bixitaanka Maraykanka ee Qorshaha Migration Compact wuxuu ku soo beegmayaa maalin ka dib markii Golaha Ammaanku kordhiyay kulammadii looga hadlayay qaxootiga, laga soo bilaabo bishii Nofember.
Taas oo dhibaatada qaxootiga Yurub ka sokow, hadal haynta arrimaha soo celiyeen, qulqulkii Rohingya ee dhanka Bangladesh ee bishii Agosto iyo waliba tuhunka addoonsiga Libiya ee dhowaan soo shaacbaxay.